Ukuhlolwa Okusheshayo kweCoronavirus, Ukuhlolwa Kwegazi Okusheshayo, Ukuhlolwa Okushesha Kwamasosha omzimba - HEO
Ucingo: +86 57186162857
Amakhasethi okuhlola okusheshayo e-COVID-19
Amakhasethi Okuhlola Okusheshayo Kwezifo Ezithathelwanayo
ISINYATHELO ESISODWA TEST HCV (Igazi Eliphelele/Serum/Plasma)
I-HCV Rapid Test Cassette/Strip/kit (WB/S/P)
I-COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Cassette (Colloidal...
Ikhasethi le-COVID-19 Antigen Rapid Test Corona Vir...
Ikhithi Yokuhlola Esheshayo Ye-OEM/ODM Umkhiqizi weCoronavirus...
I-Hangzhou HEO Technology Co., LTD izibophezele ekucwaningeni, ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni amakhasethi okuhlola e-In-Vitro Diagnostic (IVD) kanye Nelinye Ithuluzi Lezokwelapha iminyaka eyi-10 edlule.
Senze ngempumelelo ubudlelwano obuhle bebhizinisi namanye amazwe angama-60 emhlabeni jikelele, njengeNingizimu-mpumalanga ye-Asia, i-Europe, i-Latin America, iNingizimu Melika, amazwe ase-Afrika njll. Inkampani yethu ihlanganisa indawo yokusebenzela engaphezu kuka-3000 square metres. Sinesitshalo sokuhlola esigunyazwe i-National Food and Drug Administration kanye neshabhu yokusebenzela yokuhlanzwa kwe-C-grade 1100 square metres. Kusukela yasungulwa ngo-2011, saqala ukugxila ekuphepheni kokudla kanye nokucwaninga, ukuthuthukiswa kwe-In-Vitro Diagnostic Reagents, futhi silandela ngokuqinile i-ISO13485 kanye ne-ISO9001 ohlelweni lokuphatha izinga kanye nayo yonke inqubo yokukhiqiza.
Ikhwalithi Enhle Kakhulu Ibusa Ikusasa!
Imisebenzi yebhizinisi ye-Hangzhou Fenghua Economic Promotion Association——Into HEO Technology
Ntambama ka-August 15, i-Hangzhou Fenghua Economic Promotion Association yabamba umsebenzi webhizinisi - yangena ephikweni lePhini likaNobhala Jikelele "i-HEO technology" ukuze izizwele ubuhle bebhizinisi bombukiso osafufusa emkhakheni wezobuchwepheshe be-biomedical. I-Hangzhou...
I-WHO ikugxekile ukusatshalaliswa ngokungalingani komgomo omusha wokugomela umqhele
Umhlaba awukalulungele ubhubhane lwe-Covid-19 futhi udinga ukuthatha izinyathelo ezinqala futhi ezisebenzayo ukunciphisa umonakalo odalwe yilo bhubhane, kusho i-Independent Task Force on Pandemics Prepare and Response, eholwa yiWorld Health Organisation, embikweni. ikhishwe ngoMsombuluko. Lokhu...
I-Novel Coronavirus Itholwe eJalimane
Kutholakale uhlobo olusha lwegciwane le-Covid-19 eBavaria, eningizimu yeJalimane, kanti ubufakazi bokuqala buveza ukuthi lolo hlobo lwehlukile kulokho okwaziwayo. Lolu hlobo lwatholakala edolobheni eliseBavaria. Kukholakala ukuthi kutholakale uhlobo olusha lwaleli gciwane kubantu abangama-35 kwabangu-73 okuqinisekisiwe ukuthi ...
Igumbi 201, Isakhiwo 3, No. 2073 Jinchang Road, Yuhang District, Hangzhou, China
Ucingo:vic +008613738091655 Ucingo: shwi nomtekhala +008615168459686